TikTok Bots kacha mma n'ahịa
Bots TikTok kacha mma n'ahịa yana otu esi echebe akaụntụ gị
3 ụbọchị free ikpe
Automate soro / esola ụdị
Ọ dị oke nchebe yana onye nnọchi anya wuru n'ime ya
Algọridim dị mma na ọsọ ọsọ
Maka nkọwa ndị ọzọ
Enweghị nnwale n'efu n'oge a
Dị ka akpaaka nke ụdị
Ntọala echekwara mana ọ nweghị onye nnọchiteanya
Ntọala smart ọbụlagodi na ngwugwu bụ isi
Enweghị ikpe - $ 15 kwa izu
Dị ka akpaaka motorized
Platform echekwara ma ọ nweghị onye nnọchiteanya
Smart ezubere iche na kwa
Enweghị ọnwụnwa n'efu dị
Soro / esola ụdị bot
Ndị nnọchiteanya gụnyere
Ntọala dị elu na nkwado
Ọnweghị nnwale mana ọnụ na $ 15 kwa ọnwa
Akpaaka dabere na ịgbaso / esola / Dị ka
Enweghị onye nnọchiteanya, ezi uche dị mma
Kpọmkwem ezubere iche na ezigbo arụmọrụ
Ọnweghị ọnwụnwa dị
Akpaaka dabere na Jaime
Ọ dịghị onye nnọchiteanya ma a nnọọ ala ikpo okwu
Smart ezubere iche na njikwa ọsọ
Soro / esola / Dị ka ụdị bot
Enweghị ntọala proxy dị
TikTok bụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta kachasị ọhụrụ nke hụla uto na-enwetụbeghị ụdị ya kemgbe ewepụtara ya na Septemba 2016..
O toro site na mmali na oke wee bụrụ onye na -asọrịta mpi maka mgbasa ozi mmekọrịta., na ezi ihe kpatara ya.
TikTok bụ ụdị nrọ maka ndị na -ere ahịa, na oge nnọkọ na ọnụego njikọ aka n'etiti ndi kachasi elu social media.
Yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na ugbu a enwere bọtịnụ TikTok n'ahịa nke nwere ike imezi ọrụ ụfọdụ., ka soro, soro ala, ikwu okwu na amasị posts.
Anyị chọrọ ịma ụdị bọọlụ dị, otu ha si eme ma ọ bụrụ na ha kwesịrị ka ndị mmetụta na ndị na -ere ahịa weere ha.
Bots TikTok bụ isi
Anyị lere anya 7 Bots TikTok kacha ewu ewu dị taa:
Tik Tok Bot - TikTok Bot kacha mma n'ahịa, n ° 1 tere aka.
TikTool - Ezi uto, a pụrụ ịdabere na ya, na smart atụmatụ – #2.
TokUpgrade - Wụnye ma chefuo – n ° 3
Jeffrey - Ezi ikpo okwu nwere ezigbo nyocha – n ° 4.
Ngwa - Ụzọ dị mfe nke na -arụ ọrụ nke ọma – n ° 5.
Uto Tok - Ọ dị mma maka ndị mbido mana ọ bụghị dị ka lekwasịrị anya – n ° 6.
Vire - Automation dị nwayọ ma e jiri ya tụnyere ọrụ ndị ọzọ – n ° 7.
TikTokBot.io na -enyere gị aka ịkwalite akaụntụ gị site na njikọ aka na -akpaghị aka ma nwee ikike ịdọrọ ọtụtụ puku ndị na -eso ụzọ dabere na oge bot.
Anyị gbara TikTokBot izu ole na ole wee nwee mmasị na njiri mara ya na nsonaazụ ya..
Nhazi ahụ dị ngwa ma dịkwa mfe, na enwere ọtụtụ atụmatụ ị ga -eji egwu ma kwalite akpaaka gị.
Ahịa – $$ – $29.90 kwa ọnwa
Njirimara – 4/5 – Sochie / Esochinala akpaaka site na nhọrọ iche iche iche iche, algọridim nwere ọgụgụ isi na nyocha.
Nchekwa – 4.5/5 – Njikọ echekwara yana onye nnọchite anya mkpanaka.
Enyemaka – 4.5/5 – Nkwado ndị ahịa adịchaghị enyere gị aka na njem gị.
Rịba ama – 4.5/5 – Ọ kacha mma n'ihe niile ma anyị masịrị ọkachamma ịdị mfe yana itinye aka na nchekwa..
TikTool na -eji ọkọlọtọ na -eso / esola ụdị akpaaka ụdị yana ọrụ ole na ole.
Ngwa ntụnye amamihe na ihe nchọta hashtag na -enye ya ntakịrị ntakịrị karịa asọmpi ahụ.
Ọnụahịa nke nhọrọ bụ isi dị oke elu, nke ọrụ adịchaghị, ngwa ngwa na mma, dị elu.
Ahịa – $$ – $29 kwa ọnwa
Njirimara – 4.5/5 – Magburu onwe atụmatụ, gụnyere hashtags smart na aro.
Nchekwa – 4/5 – Ebe nchekwa echedoro mana ọ nweghị nhọrọ proxy wuru n'ime ya.
Enyemaka – 3.5/5 – Nkwado ndabere ma ọ bụrụ na ịhọrọ maka ọrụ adịchaghị na ọnụahịa.
Rịba ama – 4/5 – Ezigbo ikpo okwu mana ọ nweghị onye nnọchiteanya na -ahapụ ya.
Nwelite elu natara otuto dị ukwuu, ya mere anyị ga -anwale ya.
Ha nwere atụmatụ abụọ maka ibido gị – mgbe niile na pro.
N'ọnọdụ abụọ ahụ, ị na -erite uru site na onye njikwa akaụntụ raara onwe ya nye na nkwado zuru oke.
Ahịa – $$$ – $60-100 kwa ọnwa
Njirimara – 3.5/5 – Ọmarịcha nzacha mana ezubere iche dabere naanị na akaụntụ.
Nchekwa – 3.5/5 – Ebe nchekwa echekwara mana ọ ga -adị mma ịhụ onye nnọchi anya ya.
Enyemaka – 4/5 – Agụnyere njikwa akaụntụ.
Rịba ama – 3.5/5 – Ezi ọrụ mana nke chọrọ nchekwa karịa na ọnụahịa ọnụahịa a.
Jeffery bụ aha nnukwu TikTok bot.
Standard na -eso / esola akpaaka iji malite ịkpọbata ndị na -eso ụzọ a.
Ha nwere atụmatụ akwụ ụgwọ abụọ – Amalitere ụlọ ọrụ, nke wetara nchikota mbara igwe nke 349,$99 kwa ọnwa.
Ruo ugbu a, akụkọ dị ezigbo mma na ha nwetara ọtụtụ nyocha dị mma.
Ahịa – $$$ – $49.99 kwa ọnwa
Njirimara – 4/5 – Na -ezubere iche, ọnụ ọgụgụ smart na parameters dị mfe iji.
Nchekwa – 4/5 – Ebe nchekwa echekwara yana onye nnọchiteanya nkeonwe gụnyere.
Enyemaka – 4/5 – Nkwado ndị ahịa 24 hour, 7 ụbọchị na 7.
Rịba ama – 4/5 – Nnukwu akpaaka nke na -etinye igbe niile, dịtụ ọnụ karịa.
Ngwa Lelee TikTok, yiri Auto Tokker, na -enye gị ohere ịnweta mmasị na ndị na -eso ụzọ, nke dabere na aha njirimara na hashtag.
Ọ dị ọnụ ala, mana na -enye ezigbo ikpo okwu iji zụlite TikTok gị.
Ọ dị na njedebe dị ọnụ ala mana ọ ka na -enye ezigbo ikpo okwu iji bulie TikTok gị.
Ahịa – $ – $15 kwa ọnwa
Njirimara – 3.5/5 – Standard aha njirimara na hashtag ezubere iche.
Nchekwa – 3/5 – Njikọ echekwara mana enweghị nhọrọ proxy.
Enyemaka – 3.5/5 – Enyemaka n'ịntanetị.
Rịba ama – 3.5/5 – Ọrụ akpaaka dị mma, mana achọrọ onye nnọchiteanya.
Uto Tok bụ ọrụ dị mma nke na -enye ezigbo ọrụ.
Ọ nakweere usoro a na-emebu nke ịtụpụta usoro abụọ, Onye mbido na Pro.
Pro na -enye gị ntọala kachasị mma, ma na ọnụ ahịa dị elu.
Njirimara – 3.5/5 – Hashtag ezubere naanị ngwugwu Starter.
Nchekwa – 3/5 – Ebe nchekwa echekwara mana enweghị nhọrọ nnọchiteanya.
Enyemaka – 3/5 – Enweghị nkwado raara onwe ya nye.
Rịba ama – 3/5 – Ọ dịghị njọ, mana maka ọnụ ahịa ya, ọ nwere ike ịka mma.
Vire abụwo isiokwu nke nnukwu hype na nso nso a, mana anyị ejighị n'aka na nke a ziri ezi.
N'ime nyiwe niile anyị nyochara, ọ bụ nke yiri ka ọ dị oke ọnụ na atụmatụ ole na ole.
Agbanyeghị, ọ na -enye njikwa akaụntụ zuru oke, ihe nwere ike ịmasị ụfọdụ mmadụ.
Ahịa – $$$ – $100 kwa ọnwa
Njirimara – 3/5 – Hashtag ezubere iche na ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ.
Nchekwa – 3/5 – Enweghị ihe akaebe nke ndakọrịta proxy.
Enyemaka – 4/5 – Ndị njikwa akaụntụ na nkwado ịntanetị.
Rịba ama – 3/5 – Ọ dị nwute na ọ naghị ebi ndụ kwekọrọ.
Otu esi echebe akaụntụ Tik Tok gị na mmachibido iwu ?
Amachibidoro igwe mgbasa ozi iwu oge ụfọdụ ọ nọ ebe ahụ maka ezi ihe kpatara ya.
Ha na -egbochi ndị ọrụ site n'iji oke eme ihe iji mee ka uto ha ka mma, nke nwere ike ime ka ọ sie ike mgbe ụfọdụ ito ndị na -eso ụzọ gị.
Oke ndị a ga -adị mgbe niile, yabụ ihe kacha mma ị nwere ike ime iji chekwaa akaụntụ TikTok gị bụ iji faịlụ onye nnọchiteanya mobile.
Onye nnọchi anya ekwentị pụtara njikọ gị na TikTok na nke ihe nchọgharị mkpanaka, nke na -ahụ na akara ntụkwasị obi gị agaghị emetụta ma ọ bụrụ na ị gafere oke.
Ọ dị mkpa icheta na ịnweta ngọngọ na amachibidoro iwu bụ ihe abụọ dị iche., dị ka egosiri n'okpuru:
Ihe ngọngọ na -apụtakarị na egbochila gị ịme ihe
A na -akpọpụta mmachibido mgbe ewepụrụ akaụntụ gị nwa oge ma ọ bụ kwụsị kpamkpam na ọrụ
Kedu ihe eji egbochi akaụntụ TikTok gị ?
Enwere ike igbochi akaụntụ TikTok gị maka ebumnuche dị iche iche.
Nke a na -emekarị mgbe:
Ị na -eso ọtụtụ mmadụ ngwa ngwa
Ọtụtụ ọkwá na -amasị gị
Ị na -aza ajụjụ ọtụtụ ugboro
Nkwupụta gị bụ nke adịgboroja
Ị biputere ihe megidere ntuziaka EU
Ọ bụrụ n'ịgbaso ntuziaka obodo TikTok ma ezipụla ihe rụrụ arụ, ikekwe ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla.
Kedu ihe bụ isi kpatara ejiri egbochi akaụntụ gị ?
“Soro na ọdịnaya cyberbullying, mmekpa ahụ ma ọ bụ okwu ịkpọasị ma ọ bụ ịkpali ịkpọasị megide mmadụ ma ọ bụ ìgwè mmadụ n'ihi agbụrụ ha, nke agbụrụ ha, nke okpukpe ha, nke mba ha, nke omenala ha, nke nkwarụ ha, ọnọdụ mmekọahụ ha, nke mmekọahụ ha, nke njirimara mmekọahụ ha, afọ ha ma ọ bụ ịkpa oke ọ bụla ọzọ nwere ike ibute mmachibido ahụ” dịka ntuziaka obodo si dị.
Ahịrị posts – Nke a bụ ihe doro anya kpatara ya butere ọtụtụ mmadụ nsogbu Instagram. Ọ dịghị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhaneze chọrọ ịgba ọtọ n'elu ikpo okwu ha, karịsịa nke e mere maka ndị na -eto eto na -ege ntị. Ọ bụ ezigbo ndụmọdụ idobe vidiyo niile dị ọcha.
Biputere ozi gbasara egbe ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ – Mbipute ọ bụla gbasara egbe ma ọ bụ ọgwụ ike megidere ntuziaka obodo yana enwere ike machibido ya iwu ogologo.
Mbipụta nke ọdịnaya nwebiisinka – A na -atụ aro ka ị ghara iji ọdịnaya nwebiisinka na vidiyo TikTok gị. Ịmepụta vidiyo doro anya nke ndị ọrụ ndị ọzọ ama ama nwere ike bute mmachibido iwu na -ezoro ezo.
Ogologo oge ole ka machibidoro TikTok na -adịru ?
Ogologo mmachibido iwu a na-ahụkarị bụ ihe dị ka ụbọchị iri na anọ.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị na -emebi ntuziaka EU, ị nwere ike irite uru na mmachibido iwu dị ogologo na ebighi ebi.
Otu esi eme mmachibido iwu stealth ?
Ị nwere ike ichere ma ọ bụrụ na akaụntụ gị ewu ewu. Ị nwekwara ike ịmepụta akaụntụ Tik Tok ọhụrụ.
Ụfọdụ ndị ọrụ na -ekwupụta na a na -egbochi adreesị IP ha, naanị ụzọ iji dozie ya bụ ịgbanwe adreesị IP gị.
Edemede gara agaKedu ihe kacha mma Instagram Bots na 2020 yana otu esi echekwa akaụntụ gị?
Akụkọ na-esoteNa -arụ ọrụ na Instagram : Nzaghachi Instagram na TikTok